Ahoana ny fahafantarana ny isan'ny fika napetraka | Vaovao IPhone
Amin'ny fotoana maro, indrindra raha vaovao izy ireo, dia matetika no mametraka ny tweak hitantsika na ny olona fantatsika manolo-kevitra. Rehefa mandeha ny fotoana, ny zavatra azo inoana indrindra dia ny fiasan'ny iPhone amin'ny fomba miadana na ny fanjifana batterie dia avo na angamba ny fikafika sasany mifandona amin'ny hafa ary manomboka manao zavatra hafahafa ny iPhone fa tsy fantatsika hoe inona ilay volavolan-dalàna resahina. manome antsika olana. Amin'ity tranga ity, ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny fiasan'ny iPhone na iPad dia ny manamarina hoe firy ireo tweaks napetrakay mba hiezaka hanadio ary miasa hatrany toy ny tamin'ny voalohany ny fitaovantsika
Raha te hahafantatra ny isan'ny tweks isika ny fomba haingana indrindra hanisana ireo rehetra napetrakay tsirairay. Ny olana dia mipoitra rehefa be loatra ny fanitsiana ary maharitra ela kokoa noho ny mahazatra izany. Eto no heverinay fa tokony hisy fampiharana izay manao ilay asa ho antsika.
Eo no ilalaovana ny Tweak Count 2. Ity tweak ity dia hita ao amin'ny repo BigBoss maimaim-poana tanteraka Ampio izany fampahalalana izany eo amin'ny ankavanana ambony amin'ny fizarana napetraka. Fa ho fanampin'izany, manolotra antsika ihany koa ny fampahalalana eo amin'ny faran'ny lisitra, raha vantany vao naseho ny fiovana farany an'ny lisitry ireo izay napetrakay.
Amin'izany fampahalalana izany sahady afaka mahazo hevitra isika raha ny fahitana ny olana. Avo loatra io isa io, angamba tokony handinika indray isika hanala ireo sasany izay tsy ampiasaintsika. Azo antoka fa manana tweaks napetraka mihoatra ny iray sy roa ianao izay vao nampiasanao ny andro voalohany hizaha toetra ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ahoana ny fahafantarana ny isan'ny tweaks napetrakay